I-Parma kwi-Terrace - UKUPAKA YABUHLUNGU YAMAHHALA
I-80 sqm kumanqanaba amabini kunye ne-terrace enkulu efakwe kwaye ityalwe kunye neebhalkhoni ezi-2, ilitye lokuphosa ukusuka kwiziko lembali kunye nepaki yeCittadella. Iqaqambile kwaye izolile, ibekwe kumgangatho we-3 kunye nomgangatho wokugqibela (akukho kunyuswa). I-A/C, engenamda kwaye ikhawuleza kakhulu i-WI-FI kunye neTV eneNETFLIX. Ifanelekile izibini, iintsapho kunye nabahambi bezoshishino. UKUPAKWA KWABUHLUNGU kunye nomqobo kunye nolawulo olukude 30 m ukusuka kwisakhiwo. Ibha, itrattoria eqhelekileyo, indawo yokumisa iibhasi kunye neevenkile ezikufutshane. IBHAYIKILE xa uzicelile.
Indlu yam ikwindawo esembindini necwangcisiweyo, ifikeleleka lula ngemoto nangebhasi ukusuka kwisikhululo sikaloliwe. Ilungele abo bafuna ukutyelela iParma ngenduduzo epheleleyo ngeenyawo. Imizuzu eli-10 ngemoto ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya kunye neParma Fairs. Idityaniswe kakuhle kwaye ihanjiswa ziindlela ezininzi zebhasi. I-WIFI ekhawulezayo kakhulu kwaye ayinamda.
Igumbi lokuhlala elisezantsi elinekhitshi kunye nokufikelela kwi-balcony, isofa kunye neTV, igumbi lokulala eliphindwe kabini elinebalcony kunye negumbi lokuhlambela elinefestile.
Izitebhisi zokhuni ezikhululekile zikhokelela kumgangatho ophezulu apho sifumana enye indawo yokuhlala (okanye igumbi lokulala lesibini) kunye ne-sofa eba yibhedi xa kuyimfuneko, iTV yesibini, igumbi lokulala elincinci kunye negumbi lokuhlambela lesibini elinefestile. Ucango lweglasi lukhokelela kwindawo enkulu enefenitshala kunye netyaliweyo.
Kukho indawo ebumelwaneni ebandakanya yonke imbali yesixeko sam kwaye imele eyona nto idumileyo: yi "Oltretorrente", oko kuthetha "ngaphaya komlambo". Ifakwe ngaphaya kwamanzi omlambo iParma, apho ithatha khona igama layo, eli ziko lihlala liphuhliswe ixesha elide ecaleni kwedolophu yaseVia Emilia, i-decuman yakudala yekoloni yaseRoma eyasekwa ngo-183 BC. I-Oltretorrente yindawo emele ukwaziwa, inconywe kwaye incongwe....
Singavuma esona sisombululo silungileyo kwizitshixo ezihambisayo, UZIJONGE UKWAZI Iyafumaneka. Andiyi kuba khona eflethini ngexesha lokuhlala kwakho kodwa ndihlala kufutshane kakhulu kwaye nangaliphi na ixesha kwaye nangayiphi na imfuno unganditsalela umnxeba ngaphandle kwengxaki.
Ndiluncedo kakhulu ekunikezeni lonke ulwazi lokuhlala okumnandi kwisixeko sam esithandekayo.
Ekufikeni kwakho uya kufumana oko kuyimfuneko kwiimfuno zokuqala: Ndiya kwenza konke okusemandleni ukuze uzive usekhaya, uya kuzama ukunyamekela indlu ngokungathi yeyakho. Enkosi!
Singavuma esona sisombululo silungileyo kwizitshixo ezihambisayo, UZIJONGE UKWAZI Iyafumaneka. Andiyi kuba khona eflethini ngexesha lokuhlala kwakho kodwa ndihlala kufutshane kakhu…